Blah Blah Chat and Blah Blah Thoughts | The World of Pinkgold
Blah Blah Chat and Blah Blah Thoughts
Posted on February 29, 2008 by cuttiepinkgold
ကျွန်မ chat log တွေကို ဖွတာ မဟုတ်ရပါဘူး။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ စကားပြောတုန်း ၀င်လာတဲ့ အတွေးလေးတွေကို ချရေးချင်တာနဲ့ သူတို့ တွေနဲ့ ဖတ်ရတာ ခပ်သွက်သွက် လေးလဲ ဖြစ်အော် သူတို့တွေနဲ့ ဂျီတော့မှာ စကားပြောထားတာလေး တွေကိုပါ ထည့်ပေးထားပါတယ် ရှင်။
Chat with Ko Htike:
Pink Gold: မအားပါ (custom message)
7:57 PM ko-htike: အားပါသည်။ မအားချင်ယောင် ဆောင်ပါသည်။
8:33 PM me: အောင်မာ တစ်ကယ် မအားတာ
8:34 PM ကျောင်းလျှောက်ပေးနေတာလေ NTU အတွက်
ko-htike: အလကား ရွီးနေပါသည်
me: အောင်မာ ကိုထိုက်ပဲ ရွှီး
ko-htike: အောင်ပါသည်.. ငါက မရွီးဘူး ဖွတာ
8:35 PM ko-htike: ရွီးတာနဲ့ ဖွတာ မတူဘူး
((သူပြောလည်း ပြောစရ ပါပဲ။ ကျွန်မ တော်တော် ရွှီးတတ်တယ်။ အရင်ကတော့ မဆိုးပါဘူး။ အလုပ်ဝင်ပြီး နောက်ပိုင်း လူတွေနဲ့ များများ ဆက်ဆံလာရတော့ အဆင်ပြေဖို့ အတွက် ရွှီးလုံးလေးတွေ ကိုထည့်ရင်း ရွှီးတတ်သွားတာ။ အဲတော့ ရွှီးတာဟာ ကောင်းလား မကောင်းလား။ ကျွန်မ တစ်ချက် စဉ်းစား မိတယ်။ တစ်ခါ တစ်လေ ကျတော့ အဆင်ပြေဖို့ အတွက် ကိုယ့်အလို ရောက်ဖို့ အတွက် သူများးတွေကို နည်းနည်းလေးတော့ ရွှီးတာလေး တွေ ထည့်ပေးရတယ်။ တစ်ခါ တစ်လေ ကျတော့လည်း အရွှီး များရင် သူ အလကား ပါကွာ ဆိုပြီး နောက်နောင် ပြောတဲ့ စကားတွေက ယုံချင် စရာ မကောင်းတော့ လောက်အောင် ဖြစ်တတ်တယ်။ နေရာ ကြည့်ပြီးတော့ ရွှီးသင့်တာပေါ့နော်။ အရွှီး များလွန်းရင်လည်း မကောင်းဘူးပေါ့။))
Chat with Zaw Myo (Burmapyithar)
Pink Gold: ဘ၀မှာ အနိမ့်အမြင့် ရှိသလို ကော်နက်ရှင်မှာလည်း အတက်အကျ ရှိပါတယ် (custom message)
(( ဟုတ်ပါရဲ့။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ချောက်တီး ချောက်ချက် မဖြစ်စလောက်လေး ပေးထားတဲ့ ကော်နက်ရှင်ကို ကျွန်မတို့ သုံးတတ်တာ ခန္တီပါရမီ နဲ့တော့ အတော်လေးကို ပြည့်စုံပါတယ်။ ကျွန်မတောင် တစ်ခါ ပြောဖူးသေးတယ်။ စိတ်ရှည် သည်းခံ လမ်းကြောင်းမှန် သုံးရန် အင်တာနက်လို့။ ဒီကြားထဲ ပိတ်ပင် တားဆီးခြင်းများစွာကို Proxy များစွာနဲ့ ကျော်ရတာလည်း ကျွန်မ ညည်းပေါင်း များပြီ ထင်ပါရဲ့နော်။ ဒီကောင် ဇော်မျိုးတောင် စင်ကာပူက ပြန်ရောက်ခါစက Proxy မကျော်တတ်လို့ သင်ပေးလိုက်ရသေးတယ်။ ကောင်းတော့လည်း ကောင်းပါတယ် သူတို့က ပိတ်လေ ကျွန်မတို့ ပညာတိုးလေပေါ့ရှင်။ ဒါနဲ့များ မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက် ဆိုပြီး အရှက် မရှိ အော်နေသေးတယ်။))
Chatting with Chit Thu ( သူရဲ့ နစ်နိမ်းကိုက ချစ်သူတဲ့နော်။ အထင်မလွဲရဘူးနော်)
myolpn.zaw: ဟေ့ ပင့်ဂိုလ်း မင်းတို့တိုင်းပြည်မှာမီးလောင်လှချီလား
12:40 PM me: ဟုတ်ပါ့ရှင်
myolpn.zaw: နေဖို့နေရာကော ကျန်သေးလား
me: လှည်းတန်းတော့ မလောင်သေးဘူး
myolpn.zaw: ဟ ဟာ
(( ခုတစ်လော မီးတွေ တော်တော် များများ လောင်နေတယ်။ ရတနာပုံ ဈေးကြီး လောင်တာ တော်တော် နှမြောစရာ ကောင်းတယ်။ မန်းလေးက လူတွေ တော်တော် သနားစရာ ကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ လှိုင်သာယာမှာ စက်ရုံတွေကို အားကိုးပြီး ၀မ်းစာရှာစား ရတဲ့သူတွေ မီးလောင်လိုက်တော့ အကုန်ပါသွားတာ အရမ်းဝမ်းနည်း စရာ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့ တွေတောင် မီးဘေး ဒုက္ခသည်တွေကို ပိုက်ဆံတွေ အ၀တ်တွေ သွားလှူအုံးမှာရှင့်။ MBS အနေနဲ့ပေါ့။ ဘုရားဟော တရားအရတော့ တိုင်းပြည်ပျက်ခါနီးရင် မီးကျီးမိုးတွေ ရွာပါတယ်တဲ့။))
Chat with Pyae Sone:
Pyae: ဟာ.. နင်ကလည်း.. စာေ၇းတာ.. မမိုက်လိုက်တာ.. ဆတ်ဆလူးထခဲ့ကြတယ်တဲ့..
me: အာ ပြင်ပါဘူး။ အဲဒါ မိုက်တယ် လူငယ်ဆန်တယ်။
Pyae: လူတွေက နင့်ဘလောဂ့် လာဖတ်ရင် နင့်ကို အထင်သေးကြမှာပေါ့ဟ
me: မသေးပါဘူး ငါဘာလဲ ဆိုတာ ဘလောဂ့်ဂါ တော်တော် များများ သိပါတယ်
ဘယ်သူမှ အဲလို မသုံးသေးဘူး
ပြီးတော့ မောင်မျိုးကလည်း စီဘောက်မှာ အော်သွားသေးတယ်
မောင်မျိုး: မပင့်…ဘီလိုဘီလို ကန်ဘောင်မှာ ဘာဖြစ်တယ် အခုမှစာကိုဖတ်မိလို့ ဗျ
(( အဲဒါကတော့ ကျွန်မရဲ့ Blogger တို့ရဲ့ Valentine ဆိုတဲ့ ပိုစ့်ရဲ့ ပထမဆုံး စာကြောင်းကို ဖတ်မိပြီး ဂျီတော့မှာ လာပြောကြတာတွေပါ။ တစ်ခါ တစ်လေကျရင် ကျွန်မ စကား အသုံးအနှုန်းကို ဂရု မစိုက်ချင်ဘူး။ လူငယ် ပီပီ လူငယ် ဆန်ဆန်ပဲ သုံးလိုက်ချင်တယ်။ ဖတ်ရတဲ့ သူတွေ ဘယ်လို ထင်မလဲ တော့မသိဘူး။ ခေတ်စကားတွေကို စာအဖြစ်ရေးရတာလည်း မိုက်တယ်လို့တော့ ကျွန်မ ထင်တယ်ရှင့်။ ကျွန်မတို့က လွတ်လပ်စွာ ဘလောဂ့်ရေး နေကြတာလေ။ စာပေစိစစ်ရေး လည်း မလိုတော့ တစ်ခါ တစ်လေမှာ အိနြေ္ဒကြီး တစ်ခွဲသားနဲ့ စာကောင်း ပေးခန့်တွေ ရေးမယ့် အစား အဲလို ပေါ့ပျက်ပျက်လေး ရေးလိုက်တာက စာဖတ်သူ အတွက်ရော စာရေးသူ အတွက်ပါ လွတ်လပ်တဲ့ ခံစားချက် တစ်ခုကို ရနိုင်စေမယ် ထင်ပါတယ်ရှင်))
Chat with Mintasay:
Pink Gold: ချောင်းဆိုးနေတယ် ဖလက်ပြနေပြီ (custom message)
mintasay: say thout lite lay
me: ဟုတ် သောက်တယ် မပျောက်သေးတာ
mintasay: ber say lel?
6:39 PM me: ကွမ်းရွက်ပုံ ခါတိုင်း အဲဒါ သောက်ရင် ပျောက်တယ်
mintasay: hote ler? ma kyer bu bu
me: အွန့် မြန်မာပြည်သား မဟုတ်တဲ့ အတိုင်းပဲ ဗမာ ဆေးပါ
mintasay: hote ler?
me: ထက်က အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေ သိပ်မသောက်ဘူး
6:40 PM mintasay: ed lo gyi lel ma lote ne’ lay
ako so ber say hma go ma thout fu der
take care lote pay me’ lu ma shi bu htin del
6:42 PM me: ဘာပြောတာလဲ သြော်
မေးမယ့်လူ မရှိဘူး ထင်တယ်
6:43 PM mintasay: ber pyan pyaw der lel
အကို့စာကို မနည်းလိုက်ဖတ်ရတယ်.. မဖတ်တတ်ဘူး
(( အဲဒီတုန်းက ကိုမင်းတစေ ဗမာဖောင့် မရှိတာလား ဘာလားတော့ မသိဘူး။ Barglish လိုရိုက်တယ်။ ကျွန်မကလည်း ဘားဂလှစ်ခ်ျကို တစ်စက်မှ မဖတ်တတ်ဘူး။ ချက်တင် လုပ်တဲ့ သူတွေကိုလည်း အဲလိုမျိုးတွေ မရိုက်စေချင်ဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာ စွမ်းရည်ကိုသာ မက မြန်မာစာ စွမ်းရည်ကိုပါ ကျဆင်းစေတယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ တစ်ချို့တွေက အဲလိုပြောရင် ကြီးကျယ်တယ် ထင်ကြတယ်။ နင်က ဘာလဲပေါ့။ ကိုယ့်ကို စိတ်ဆိုးပြီး block လုပ်သွားတဲ့ သူတွေကို တောင်ကြုံဖူးတယ်။ ခုတော့လည်း ဂျီတော့မှာ အဲလိုပြောကြတာက chat language တစ်ခုလို ဖြစ်လာပြီ။ ကျွန်မ ခုတော့ မရိုက်တတ်ရင်တောင် ဖတ်တတ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်ရှင်))
Chat with Kaung Kin Ko:
me: u know, I think this pc has keyboard error
kaungkinko: ဘာလို့ တုန်း
me: I can’t type MM font but I can see
4:40 PM kaungkinko: သြော
me: so I chat with u in English
4:41 PM me: but I’m not Bo Yuu naw 😛
4:42 PM kaungkinko: အင်းပါ။ သိပါတယ် ဖရုံယို
me: nope Pea Yo , Pea Sein
4:43 PM kaungkinko: သြော ဟားဟား
(( ကျွန်မက ဘိုရူးလို့ အပြောခံရမှာလည်း ကြောက်သေးတယ်ရှင့်။ မြန်မာဖောင့် ရိုက်လို့ မရတဲ့ စက်တွေမှာ ထိုင်မိလို့ ဘိုလိုများ ချက်မိရင် အဲလိုလည်း ပြန်ဖြေရှင်းရသေးတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဂျီတော့မှာ ဗမာလို မရိုက်ချင်ရင် ဘိုလိုရိုက်တာ ကောင်းမယ် ထင်တယ်နော်။ အင်္ဂလိပ်စာ တက်လာတာပေါ့။ ရှင်တို့ရော ဘယ်လို ထင်ကြသလဲဟင်။ Barglish ရိုက်တဲ့ သူတွေကို ကျွန်မ မကောင်း ပြောတာ မဟုတ် သလို အထင်သေးတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ အမြင်လေးကို တင်ပြတာပါရှင်))
Chat with Ko Thikner (MM Thinker)
me: ကိုသာခင် မင်္ဂလာပါ
mmthinker: အင်း နာမည်တော့ ဖျက်ပြီ
4:10 PM ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်ပင့်ကူရေ
4:11 PM သင်ကာ = သာခင် မိုက်တယ်
mmthinker: ကိုသာခင် မီးသတ်သမား..ပေါ့
4:12 PM me: ဟားဟား
4:13 PM ကိုသာခင် မီးသတ်သမား ပိုက်ဆံမပေးရင် သူမသွား
(( မီးတွေ လောင်တယ် လောင်တယ်။ တောမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ မြို့ကြီး ပြကြီးမှာ မီးသတ် သမားတွေ ဘာလုပ်နေကြလဲ။ သီး လေး သီး မှာ လူပျက်တွေ ပျက်လုံးထုတ်သလိုပဲ တစ်ပေါက်က ပိုက်ဆံထည့်ရင် နောက်တစ်ပေါက်က ရေထွက်တယ်တဲ့။ ကိုသင်ကာကို စနေတုန်း အတွေးလေး ၀င်လာတာပါ။ ခုတော့ မီးသတ်သမားတွေရယ် ပြည်သူတွေနဲ့ သံဃာတွေကို သတ်ဖို့ လေ့ကျင့်နေရလို့ မီးလောင်တဲ့ နေရာကို အချိန်မီ မသွားနိုင်လာ လားကွယ်လို့တောင် မေးမိချင်သေးရဲ့။ ပင့်ဂိုလ်းတဲ့နော် ဒဲ့ဒိုး ပြောတယ်))
ကျွန်မ တင်တဲ့ chat log မှာ အမှား မပါပါဘူးနော်။ ပါရင် ချက်ချင်း complain လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ ပြင်ပေးပါမယ်။
ကောင်းကင်ကို on February 29, 2008 at 2:27 pm said:
blah blah comments တွေလာပေးတယ်ဟေ့ 😀
ပြည့်စုံ on February 29, 2008 at 2:59 pm said:
mm on March 2, 2008 at 6:17 am said:
ထက်ထက်တို့ကတော့ ဆားချက်ပုံ အလွန်လှတယ်။
Chatting တွေနဲ့ ပို့စ်လုပ်သွားတာ မိုက်တယ်ဟေ့။ သင်ကာ့ညီမလို့မပြောရဘူး။ တော်လိုက်ပုံက…။
Ka Daung Nyin Thar on March 2, 2008 at 3:30 pm said:
ဘလာ ဘလာတွေက တယ်လဲ အလာချည်းကိုးဗျ။
ဒါနဲ့ ဒါဟာ ပင့်ဂိုးလ်ဘလော့မှတ်လား။ ကြွတယ် ရွတယ်။ အဲအဲ လူငယ်ဆန်ဆန် ပြောကြည့်တာပါ။ ဟိ
Best Foods Of Myanmar on March 4, 2008 at 8:55 am said:
ကိုသင်ကာက တော်တာလား ဒါမှ မဟုတ် တော်တဲ့ သူတွေကို ညီမအတင်း လိုက်လုပ် နေတာလား အဟိ
ကြွတယ် ရွတယ် လန်းတာများ လန်ထွက် ပျံတက်နေတယ်
မောင်မျိုး on March 5, 2008 at 8:03 am said:
ဟားဟား……..အခုမှရောက်လို့ဖတ်မိတာ ရယ်နေရတယ်ဗျ…လန်းတယ် ဆန်းတယ်။